Wisdom Hill ကျောင်းအုပ်ရဲ.အမဖြစ်သူ ဒေါ်သီရိမေရဲ. တရားဝင် ဖြေရှင်းချက်…. - TheeSayChin
July 11, 2019 Min Yar Zar	0 Comments ပြည်တွင်းသတင်း
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ Wisdom Hill ကနေပြီးတော့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့သက်ငယ် မုဒိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တရားဝင် သတင်းမှန်တွေ ဆိုပြီး လူမှုစာမျက်နှာတွေမှာ ရေးသားမှုတွေ ပြုလုပ်နေခဲ့တဲ့ Wisdom Hill ကျောင်းအုပ်ရဲ့အစ့မဖြစ်သူ ဒေါ်သီရီမေ ဟာ သူ့ ရဲ့ပြောဆိုရပ်တည်ချသ်တွေ ကြောင့် အင်တာနက်ပေါ်မှာ အပြင်းအထန်ဝေဖန်ခံနေရပြီး ပုဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိ ကြုံတွေ့ ခဲ့ရတယ်လို့သိရသလို အခုချိန်မှာတော့ သူဟာ မီဒီယာ တစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျနဲ့ပတ်သက်လို့တရားဝင် ဖြေရှင်းချက်တွေ ပေးသွားခဲ့ပါတယ် …။
အရင်တုန်းက အစ်မ Wisdom Hill အမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေကို သိသလောက်ပေါ့နော် …ပို့စ်လေးတွေရေးပြီးတင်ပေးခဲ့တယ်။ အခုတော့အဲလိုဆက်ရေးဖို့ မလိုတော့ဘူးထင်တယ်။ ရဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေလည်း ပြီးသွားပြီဆိုတော့ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ချပြခွင့်ရလာပြီ။ ဒါကြောင့် မလို့အစ်မက တရားဝင်ချပြတဲ့ မီဒီယာကို ပြည်သူတွေ ပိုပြီး အာရုံစိုက်နိုင်ဖို့ အစ်မရဲ့ဖေ့ဘုတ်စ် ပရိုဖိုင်ကို လောလောဆယ် ခဏ Deactivate လုပ်ထားတဲ့အဖြစ်ကို ဖြေကြားသွားခဲ့ပါတယ် …။
လက်ရှိ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပျံ့ နှံ့ နေခဲ့တဲ့ သတင်းတွေ အပေါ်မှာလည်း Fashion Academy ဂရုချက်ပေါက်ကြားမှုဟာ အတုဖန်တီးလုပ်ကြံခံရတာသာဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိ ဂျပန်မှာ လူကုန်ကူးလာခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ အဖြစ်နဲ့သက်ငယ် မုဒိမ်းမှုမှာလည်း ပါဝင်ပတ်သက်ပြီး သမီလေး ဗစ်တိုးရီးယားရဲ့မိဘတွေကို နှုတ်ပိတ်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ သတင်းဟာလည်း လုံးဝ မဟုတ်မှန်ကြောင်း သူကငြင်းဆိုသွားခဲ့ ပါသေးတယ် …။
ဒါ့အပြင် မိမိကို ပုံစံအမျိူးမျိူးနဲ့အသရေဖျက်နေတဲ့။ မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့ အရေးအသားပေါင်းများစွာလဲ ရှိနေသေးကြောင်း သူက ပြောသွားခဲ့ပါတယ် …။
ပုဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှု အနေနဲ့ “”သီရီမေ ပွဲကြမ်းတယ် “” ဆိုတဲ့ Video ဖိုင်ထွက်ပေါ်လာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း Video ဖိုင် ပေါက်ကြားစေခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီကိုလည်း အရေးယူသွားမယ်လို့ဒေါ်သီရီမေ က တရားဝင်ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်နော် … ။ ။
ဒီတရားဝင် ရှင်းလင်းချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်စုံတစ်ရာ တွေးဆဆင်ခြင်နိုင်စရာ ရရှိနိုင်မယ်လို့ မျော်လင့်ရင်း မျဝေ တင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ် … ။
Wisdom Hill ကြောငျးအုပျရဲ.အမဖွဈသူ ဒျေါသီရိမရေဲ. တရားဝငျ ဖွရှေငျးခကျြ….
ဒီရကျပိုငျးအတှငျးမှာ Wisdom Hill ကနပွေီးတော့ ဖွဈပကျြခဲ့တဲ့သကျငယျ မုဒိမျးမှုနဲ့ပတျသကျလို့တရားဝငျ သတငျးမှနျတှေ ဆိုပွီး လူမှုစာမကျြနှာတှမှော ရေးသားမှုတှေ ပွုလုပျနခေဲ့တဲ့ Wisdom Hill ကြောငျးအုပျရဲ့အစ့မဖွဈသူ ဒျေါသီရီမေ ဟာ သူ့ ရဲ့ပွောဆိုရပျတညျခသျြတှေ ကွောငျ့ အငျတာနကျပျေါမှာ အပွငျးအထနျဝဖေနျခံနရေပွီး ပုဂိုလျရေးတိုကျခိုကျမှုတှအေထိ ကွုံတှေ့ ခဲ့ရတယျလို့သိရသလို အခုခြိနျမှာတော့ သူဟာ မီဒီယာ တဈခုနဲ့အငျတာဗြူးမှာ ဖွဈပကျြခဲ့သမနြဲ့ပတျသကျလို့တရားဝငျ ဖွရှေငျးခကျြတှေ ပေးသှားခဲ့ပါတယျ …။
အရငျတုနျးက အဈမ Wisdom Hill အမှုကိစ်စနဲ့ပတျသကျတဲ့ သတငျးတှကေို သိသလောကျပေါ့နျော …ပို့ဈလေးတှရေေးပွီးတငျပေးခဲ့တယျ။ အခုတော့အဲလိုဆကျရေးဖို့ မလိုတော့ဘူးထငျတယျ။ ရဲလုပျငနျးစဉျတှလေညျး ပွီးသှားပွီဆိုတော့ ပှငျ့လငျးမွငျသာစှာ ခပြွခှငျ့ရလာပွီ။ ဒါကွောငျ့ မလို့အဈမက တရားဝငျခပြွတဲ့ မီဒီယာကို ပွညျသူတှေ ပိုပွီး အာရုံစိုကျနိုငျဖို့ အဈမရဲ့ဖဘေု့တျဈ ပရိုဖိုငျကို လောလောဆယျ ခဏ Deactivate လုပျထားတဲ့အဖွဈကို ဖွကွေားသှားခဲ့ပါတယျ …။
လကျရှိ အှနျလိုငျးပျေါမှာ ပြံ့ နှံ့ နခေဲ့တဲ့ သတငျးတှေ အပျေါမှာလညျး Fashion Academy ဂရုခကျြပေါကျကွားမှုဟာ အတုဖနျတီးလုပျကွံခံရတာသာဖွဈကွောငျး၊ မိမိ ဂပြနျမှာ လူကုနျကူးလာခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ အဖွဈနဲ့သကျငယျ မုဒိမျးမှုမှာလညျး ပါဝငျပတျသကျပွီး သမီလေး ဗဈတိုးရီးယားရဲ့မိဘတှကေို နှုတျပိတျခဲ့တယျ ဆိုတဲ့ သတငျးဟာလညျး လုံးဝ မဟုတျမှနျကွောငျး သူကငွငျးဆိုသှားခဲ့ ပါသေးတယျ …။
ဒါ့အပွငျ မိမိကို ပုံစံအမြိူးမြိူးနဲ့အသရဖေကျြနတေဲ့။ မဟုတျမမှနျ လုပျကွံဖနျတီးထားတဲ့ အရေးအသားပေါငျးမြားစှာလဲ ရှိနသေေးကွောငျး သူက ပွောသှားခဲ့ပါတယျ …။
ပုဂိုလျရေးတိုကျခိုကျမှု အနနေဲ့ “”သီရီမေ ပှဲကွမျးတယျ “” ဆိုတဲ့ Video ဖိုငျထှကျပျေါလာမှုနဲ့ပတျသကျပွီးတော့လညျး Video ဖိုငျ ပေါကျကွားစခေဲ့တဲ့ ကုမ်ပဏီကိုလညျး အရေးယူသှားမယျလို့ဒျေါသီရီမေ က တရားဝငျပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျနျော … ။ ။
ဒီတရားဝငျ ရှငျးလငျးခကျြနဲ့ ပတျသကျပွီး တဈစုံတဈရာ တှေးဆဆငျခွငျနိုငျစရာ ရရှိနိုငျမယျလို့ မြျောလငျ့ရငျး မဝြေ တငျဆကျပေးလိုကျရခွငျး ဖွဈပါတယျ … ။
EFIL – AlinnMyay (အလငျးမွေ)
← အသက်ဝင်နေတဲ့ ပန်းချီကားတွေလိုမျိုး လှရက်လွန်းကြတဲ့ အမျိုးသား Idol များ
ကြိမ်နှုန်း ဇာတ်ကားကြီး Red Carpet Show ကို အနက်ရောင် Dress လေးနဲ့တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ →
July 9, 2019 Min Yar Zar 0